Isityalo Vs Undead Ukukhuphela Simahla simahla kwi-Android [Fumana i-NFTs]
ngeposi: Septemba 18, 2021 Septemba 18, 2021
Zuza ii-NFT kwaye uzithengise ukuze wenze inzuzo enkulu. Nanku umdlalo obizwa ngokuba Utyalo vs Undead Apk onikezela ngenani elingenamda lamathuba okufumana kunye nokuzonwabisa.
Ngomnye wemidlalo emitsha ekuvumela ukuba wenze imali kwi-intanethi. Ke, tshintsha umdlalo wakho ube ngumthombo wengeniso. Khuphela umdlalo ngokusebenzisa ikhonkco elingentla.
Yintoni iPlant vs Undead Apk?
Uyikhuphela njani kwaye uyidlale njani iPlant vs Undead Apk?
Ukutyala kunye nokuNgafunyanwa I-apk yinkqubo yemidlalo esekwe blockchain yeefowuni eziphathwayo ze-Android. Kukho umdlalo olula onokuhamba kuwo kwaye wenze iiNFTs. Ezi ziimpawu ezinokuthi zingathengisi ngamaxabiso amakhulu. Ke, ngenxa yoko, unokufumana umvuzo.
Ayisiwo kuphela umdlalo onokuzama ngawo kwifowuni yakho, nokuba zikhona iitoni zazo. Ukhuphela umdlalo simahla ngokupheleleyo kwaye akukho ntlawulo kwaphela. Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukuyidlala kwaye ufumane iiNFTs, kuya kufuneka utyale imali encinci phaya.
Kuya kufuneka wenze iakhawunti kulo naluphi na utshintsho olungcono noluthembekileyo apho kufuneka ubeke khona imali yakho. Emva koko uthenge amathokheni abo. Ngoku kufuneka ugqithisele ezo thokheni kumdlalo. Emva koko kufuneka wenze iakhawunti apho kwaye uya kufumana ukuhambisa okanye ukufumana ukhetho.
Apho uyakufumana iintlobo ezahlukeneyo zemithi okanye zezityalo ekufuneka uzichonge. Emva koko dibanisa okanye ukhulise ezintsha. Ke, ngaloo nto, unokwenza ezinye izityalo ezitsha nezinexabiso eliphezulu. Yindlela esebenza ngayo umdlalo wokudlala. Kodwa ungarhoxa ukwimo yeethokheni.
Kuya kufuneka usebenzise iMetamask Wallet kwi-Android yakho okanye ngeChannel njengolwandiso. Emva koko kuya kufuneka uqhagamshele eso sipaji kumdlalo. Ke, uya kuba nakho ukudlala kwaye ufumane inzuzo. Kodwa ngaphambi koko, kuya kufuneka ukhuphele usetyenziso kwaye uyifake kwifowuni yakho.
igama Utyalo Vs Undead
ubungakanani 38.65 MB
Igama lepakheji com.PvU.PvUFarm
Iyafuneka i-Android 4.4 kunye no-Up
Ilula ukudlala ngoba umdlalo wokudlala ulula kwaye kulula. Nangona kunjalo, unokujongana nemicimbi ethile ekuqaleni njengokuqhagamshela isipaji kunye nobhaliso. Nangona kunjalo, ndiza kuchaza ukuba kolu hlaziyo. Ke hlala nathi kude kube sekupheleni.
Isityalo vs i-Undead Apk ibonelela ngokudlala ngokulula. Zininzi iindidi zezityalo ekuya kufuneka uzithenge kwaye uzilinganise okanye ukhule. Emva koko, uya kuba nakho ukwenza izityalo ezibiza kakhulu kwaye zibhetele. Emva koko uya kuba nakho ukwenza ii-NFT ngaloo nto.
I-NFT zizinto onokuzithengisa kwimarike ngoku. Emva koko unokuhlawulela okanye uthengise abo ukwenza imali. Nangona kunjalo, ngenxa yoko, kufuneka ujoyine iMetamask Wallet. Unokuba simahla kunye nezityalo zepremiyamu. Ukukhula ngakumbi, unokutyala amathokheni.
Ukuze udlale umdlalo wePlant vs Undead NFT, kuya kufuneka ukhuphele ifayile yayo ye-Apk kweli phepha. Emva koko uyifake kwifowuni yakho ye-Android. Ngoku kuya kufuneka ungene.
Ukungena, kufuneka uqhagamshele kwisipaji seMetamask kwaye undwendwele iwebhusayithi esemthethweni yePlant vs Undead Game. Kuya kufuneka ubhalise iakhawunti. Awunakho ukubhalisa kwiApp kodwa ungawudlala umdlalo kwifowuni yakho.
Ke, kuya kufuneka ubhalise kwiwebhusayithi kwaye uskene ikhowudi ye-QR yeakhawunti yakho ngomdlalo okwi-Android yakho. Emva koko uya kufikelela ngokuzenzekelayo kumdlalo.
Emva koko ungahambisa iithokheni ze-PVU kwisipaji sakho. Ngoku kufuneka uqhagamshele eso sipaji kwiakhawunti yakho yokudlala usebenzisa ikhowudi yeskena seQR. Ngoku ungaqala ukudlala.
Lelona thuba libalaseleyo labasebenzisi be-Android ukuqala ukufumana isixa esikhulu semali ngePlant vs Undead Apk. Khuphela ngokusebenzisa ikhonkco elingezantsi.
exhonyiweyo imidlalo yokuzonwabisaephawulweyo Utyalo vs Undead Apk, Ukutyala vs Umdlalo ongafakwanga, Ukukhuphela ngokuDlala ngokuDlala iMidlalo